၂၀၁၅ အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခန့်မှန်းချက် | Martech Zone
ဒါမှမဟုတ်အခုတောင်မှ! ဤသည်မှာစျေးကွက်သမားများစဉ်းစားရန်လိုသည့်အချက် ၁၀ ချက်၏ခိုင်မာသောစာရင်းဖြစ်သည်။
သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာများကိုပိုမိုမကြာခဏကိုင်တွယ်သောနည်းဗျူဟာများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်၏အများစုကိုမည်သည့်နေရာတွင်ခွဲဝေချထားရမည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒါကြောင့် Wheelhouse အကြံပေးများ ပြောင်းလဲခြင်းကို ဦး ဆောင်ရန်၊ အလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းများသို့အီးမေးလ်စျေးကွက်မှပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်၊ ဤအချက်အလက်အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပြည့်စုံအောင်လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
10 စျေးကွက်ခန့်မှန်းချက် 2015 ခုနှစ်
တိုး စျေးကွက်ရှာဖွေရေး software ကိုဝယ်ယူ.
ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ပိုမိုထိရောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြသည် - ကျယ်ပြန့်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပိုမိုထိရောက်သော၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော၊ ပစ်မှတ်ထားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏တုံ့ပြန်မှုများကိုသုတေသနပြုခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်တိုင်းတာခြင်းနှင့်တိုင်းတာရာတွင်သင့်အားကူညီရန်ကိရိယာများနှင့်ပလက်ဖောင်းများသည်သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသုံးစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
Tags: ကြော်ငြာဖြုန်းအကြောင်းအရာစျေးကွက်ဧည့်သည်တင်ခြင်းhyper-segmentinfographicစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအချက်အလက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆူညံသံစျေးကွက်ရှာဖွေရေး software ကိုဝယ်ယူmicro- ပစ်မှတ်ထားမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအွန်လိုင်းကြော်ငြာဖြုန်းဗီဒီယိုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးwheelhouse အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်